Walee Waa Shax Nin Weyn!! - Gundogan Oo Shaxdiisa Abid Ugu Fiican Soo Xushay, Kooxdiisa Oo Uu Naxdin Ku Dilay & Midka Uu Dafiray Messi Iyo Ronaldo - Gool24.Net
Walee Waa Shax Nin Weyn!! – Gundogan Oo Shaxdiisa Abid Ugu Fiican Soo Xushay, Kooxdiisa Oo Uu Naxdin Ku Dilay & Midka Uu Dafiray Messi Iyo Ronaldo
Kubbad-sameeyaha Manchester City ee Ilkay Gundogan ayaa soo xushay kooxdiisa riyada oo uu kusoo ururiyey halyeeyo hore oo hawlgab noqday iyo kuwo hadda kusii jira garoomada, laakiin waxa uu gebi ahaanba ka reebay laacibiinta kooxdiisa Man City iyo sidoo kale Premier League oo aanu hal ciyaartoyna kaga soo darin.
Gundogan oo kasoo garab ciyaaray laacibiin ay ka mid ahaayeen Yaya Toure, David Silva, Kein de Bruyne, Vincent Kompany iyo Sergio Aguero ayaa waraysi uu siiyey wargeyska Sport Bild ee kasoo baxa waddanka Jarmalka waxa uu dhamaantood kaga reebay liiska kooxda xiddigaha oo la weydiiyey inuu soo xusho.
Taageereyaasha Manchester City ayaa filayay in laacibiinta sida Lionel Messi, Zinedine Zidane iyo Ronaldinho ay xulashoodu tahay wax la fahmi karayo laakiin waxa ay rajaynayeen in ugu yaraan hal ciyaartoy uu kaga soo dari doono.
Laacibkan oo asal ahaan kasoo jeeda waddanka Turkiga, una ciyaara xulka qaranka Germany, waxa uu goolhaye u doortay Claudio Taffarel oo ahaa halyeygii goolka ee xulka qaranka Brazil 90-meeyadii wacdaraha dhigi jiray, sidoo kalena kula guuleystay Koobkii Adduunka ee 1994-kii iyo 1998-kii oo laga qaaday.
“Taffarel wuxuu ahaa goolhaye cajiib ah markii uu Galatasaray kula guuleystay UEFA Cup sannadkii 2000. Waxaan daawan jiray ciyaaraha Gala in badan markii aan yaraa.” Ayuu yidhi isaga oo sababaynaya xulashada Taffarel.
Dani Alves iyo Philipp Lahm ayuu difaaca baallaha ka dhigay, waxaanu difaaca dhexe usoo doortay Paulo Maldini iyo Alessandro Nesta, halka uu khadka dhexena markiiba lasoo booday Xavi Hernandes.
Zinedine Zidane iyo Kaka ayaa khadka dhexe oo saddex laacib ah uu ku dhamaystiray, waxaanu ku daray Lionel Messi iyo Ronaldinho oo garbaha weerarka ah, halka uu weerarka tooska ahna usoo xushay halyeygii reer Brazil ee Ronaldo Nazario.
Dani alive umtiti ramos pique
Iniesta xavi sergio boskut
cr7 ronaldo nasario lionel messi